I-8 yezona ncwadi zithethwe kakhulu ngezihloko zembali ngalo mzuzu | Uncwadi lwangoku
Ndiphosile inamba yokuqala Ikholam yomlilo, de Ken follet, esandula ukupapashwa kwaye sele iphezulu kuluhlu. Kubonakala ngathi izigidi zabalandeli bombhali waseWales bezimlindele ngolangazelelo. Kodwa kukho izihloko ezininzi ezikwizikhundla zokuqala zezona ziphawulwe kakhulu ngoku inoveli yembali. Ndizigcinile ezi Iincwadi ze-8, Ukusukela kwinto ezintsha ukuya kwezakudala.
1 IiNkosi zaseNtla - uBernard Cornwell
2 Ibhotwe leNyanga-uWeina Dai Randel
3 Uncumo lweWolf-UTim Leach
4 I-Knight ye-White Boar - uJosé Javier Esparza
5 I-Spartan - uJavier Negrete
6 Isaga yexesha elide- uEva García Sáenz de Urturi
7 Umphathi woLwandle kunye neMfazwe-uPatrick O'Brian
8 Ndiza kubusindisa ubomi bakho-uJoaquín Leguina noRubén Buren
Iinkosi zasemntla -Bernard Cornwell
Incwadi yesithathu kwi saga ka IiSaxon, iiViking kunye namaNorman de UBernard Cornwell, umbhali odumileyo oliNgesi, umyili wompu URichard Sharpe kunye nenkosi yohlobo. Cwangcisa ifayile ye Uhlaselo lwe-viking yaseBritani ngexesha lokulawula UAlfred Omkhulu, Olu ngcelele lwamanqaku lwapapashwa ngo-2008.
Umlinganiswa ophambili ngu Uhtred Ragnarson, ngamanye amaxesha eyaziwa ngokuba yiUhtred Uhtredson. Uzalelwe eNorthumbria, wabanjwa kwaye wamkelwa ngamaDanes. Bayamfundisa njengomnye wabo. Kule noveli Uhtred buyela emantla emva kokunceda uAlfred ukuba ajike iWessex ibe bubukumkani obuzimeleyo beSaxon. Ufuna ukufumana umlingane wakhe, kodwa endleleni nibalekela kwilizwe lesiphithiphithi nasemfazweni.
Ngokuchanekileyo le saga inayo uhlengahlengiso lwamva nje njengoluhlu lweTV ukusuka kwisihloko sakho sokuqala, Ubukumkani bokugqibela.
inyanga, iS Palace -UWeina Dai Randel
Ngaba ifayile ye- inoveli yokuqala yalo mbhali waseTshayina. Sikwi nyaka 631 kunye nomlinganiswa ophambili, mei, ohlala nosapho lwakhe ngokuzolileyo, kodwa ngenxa yeemeko, uya kuba yinxalenye ye Abafazi bamashweshwe yebhotwe lobukumkani. Awunakukhetha ngaphandle kokuzama fumana ingqalelo yomlawuli. Kwaye uya kuyenza ekuphela kwendlela azi ngayo: ngeempawu ezimenze ukuba abe okhutshiweyo phakathi kwamanye amashweshwe.
Uncumo lwengcuka -U-Tim Leach
Okwangoku kulandelwe kwangaphambili kuba ayipapashwa kude kube ngu-Okthobha 26 ULeach waphumelela kwiDyunivesithi yaseWarwick, apho ahlala khona kwaye ufundisa ukubhala ngobuchule.
Elinye ibali nge I-vikings kunye nomlinganiswa ophambili, imbongi IKirián engenamhlaba. Yena nomhlobo wakhe uGunnar, igorha lakudala leViking elihlala eIceland, baphuma baya bulala isiporho eyayihlukumeza ifama engummelwane. Kodwa yayiyinyani kwaye babulala umntu. Olo lwaphulo-mthetho Inkulungwane ye-XNUMX i-Iceland , ngaphandle kookumkani okanye iinkokeli, yayinokucocwa kuphela ngesilivere okanye ngegazi. Okanye ujonge utshaba olunoncumo.
I-Knight ye-White Boar -UJosé Javier Esparza
Intatheli kunye nombhali, umbhali weenoveli ezingaphezulu kwama-20 zembali, upapashe le noveli kwi 2012. Ubalisa ibali lika Zowuni, ethi kwiminyaka yokugqibela ka Inkulungwane yesi-XNUMX wexesha lethu, uwela iintaba zaseCantabrian nosapho lwakhe kukhangelwa ilizwe elingcono. Kodwa bayazi ukuba banokuhlangabezana nokuphangwa kwamaSilamsi okanye baphele bengamakhoboka kwimarike enkulu yaseCórdoba. Ii-avatars zakho ziya kuba abaphambili beReconquest.
I-spartan -UJavier Negrete
Esi sidanga kwi-Classical Philology sikhulisa ikakhulu iintlobo ze Intsomi namabali esayensi. Kodwa ubhale inoveli inkcubeko ngempumelelo.
Kukwathengiswa kwangaphambili kude kube sekupheleni kwale nyanga, ngale noveli siya kunyaka 480 BC C. Ikumkani LeonidasNgaphambi kokuba afe kwidabi laseThermopylae, thumela incwadi kwigosa Perseus kwaye uyala ukuba abuyele eSparta ayinike umfazi wakhe, uGorgo. Kodwa enyanisweni uPerseus ngunyana kaKumkani uDamarato, olixhoba leyelenqe lebhotwe, baphulukana nelungelo lokuhlala etroneni kwaye kufuneka ufunde ukusinda njengegorha elilula.
Isaga sabadala -U-Eva García Sáenz de Urturi
En 2012 le noveli yapapashwa eyayiyenye yeefayile ze- ukuthengisa okukhulu kunye neziganeko ezibalulekileyo. Imbali kunye nolwalamano lwe ixesha elide Iago del Castillo, kunye neminyaka engama-10.300 XNUMX, yaye Adriana, i-prehistorian encinci kunye nokuzimisela ebuyela kwi-Santander yakhe yemveli, eqeshwe liZiko loLondolozo lweMbali apho isebenza khona, isaziwa
Umphathi wolwandle kunye nemfazwe -UPatrick O'Brian
Iklasikhi yeklasikhi. Isihloko sokuqala kuthotho yeenoveli ezingama-21 ezibhalwe yinkosi yaseBritane yohlobo lwe-adventure yolwandle. Kudlala umphathi UJack Aubrey kunye nendalo kunye nohloli UStephen Maturin, basenjalo nangoku ibalulekile kwabo bazingcayo ngokuba ngabathandi benoveli yezembali.
Kule noveli yokuqala sikuyo Mahon, ngo-Epreli 1800, Ngokupheleleyo iimfazwe ze-napoleonic phakathi kweBritani neFrance. Apho, ngexesha lekonsathi, uGqirha Stephen Maturin wadibana ngelo xesha-Lieutenant Jack Aubrey. Abalinganiswa abohlukileyo njengoko bechasene, ubuhlobo abaza kubuphuhlisa buya kuba ngonaphakade.
Ndiya kubusindisa ubomi bakho -UJoaquín Leguina kunye noRubén Buren
NgoJulayi 5 le noveli iphumelele UAlfonso X El Sabio Imbali yeMbali yeNoveli kuhlelo lwayo lweshumi elinesithandathu. Ibhaliwe kwi-tandem nguLeguina kunye no-Buren, ibalisa ngobomi be UMelkor Rodriguez, i-anarchist ekwabizwa ngokuba yi «Ingelosi ebomvu', Esindise ubomi obuninzi ngexesha le- Udabi lasekuhlaleni kwaye ungutatomkhulu kaBuren.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli » I-8 yezona zinto zithethwa kakhulu ngezihloko zeenoveli zembali ngoku